Inona no tetik’asa loko loko birao tsara indrindra? – RGB Color Picker
Diniho ny fahazoana efitrano Ho an’ny efitrano birao littler, ny olona iray dia afaka maka loko miloko toa ny fotsy, beige sy ny sisa indrindra ho an’ny tafo satria afaka manampy mamorona sary lehibe kokoa izany. Amin’ny lafiny iray, ny loko maizina dia tonga lafatra amin’ny efitrano birao lehibe satria ireo dia afaka manamaivana sy mahazo aina ny efitrano.
Mifantoha amin’ny fandozana fandrobohana mangatsiaka toa an’i Angela Wright koa miahiahy bebe kokoa amin’ny fametrahana ilay aloka noho ny fikosoham-bolo fotsiny. Midika izany fa ny tanjaky ny aloka dia ny antony manasaraka ny fanatanterahana ny mpiasa sy ny fitondran-tena fa ny tond ny tena manokana. Miaraka amin’ireto andalana ireto dia hihamafana ny famirapiratra matanjaka sy mahafinaritra nefa ny tony kokoa amin’ny alàlan’ny fandriana ambany dia ho tony.
Ny Blue dia manome hery ny Mind-Angela Wright dia manome soso-kevitra ny fampiasana manga ho an’ny toeram-piasana napetraky ny mpivarotra boky na manam-pahaizana manokana izay mila manao asa betsaka. I Angela, na izany aza, dia manome soso-kevitra ny hampiasana manga amin’ny fofonosana volomboasary mba hanampiana ny fandanjalanjana ny asan’ny saina ary hampitombo ny fahatsapana fahatsapana ho an’ny fomba.